गायक राजेश पायल राई दुर्घटनामा परे, राई सहित ८ जना घाइते ! हेर्नुहोस् पछिल्लो अवस्था यस्तो छ !  Hamrosandesh.com
गायक राजेश पायल राई दुर्घटनामा परे, राई सहित ८ जना घाइते ! हेर्नुहोस् पछिल्लो अवस्था यस्तो छ !
प्रेम सुनार/गुल्मी, २४ चैत ।
तेश्रो गुल्मी महोत्सवको आज छैठौ दिनका प्रमुख आकर्षकका रुपमा गुल्मी आउँदै गरेका गायक राजेश पायल रार्ई कार्यक्रमम स्थल नजिकै आईनपुग्दै गाडी दुर्घटनामा परेका छन् ।
बुटवल तर्फबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास तर्फ आउँदै गरेको गायक राईको बा १२ झ ४४४२ नम्वरको कारसंग १ झ ३१३३ नम्वरको ट्याक्सी दुविचौमा ठोक्कीदा ट्याक्सीमा सवार ७ जना घाईते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी जनाएको छ ।
गायक राईलाई केहि नभएको प्रहरी र तेश्रो गुल्मी महोत्सव आयोजक समितिले बताए पनि अहिले साँझ पौने सातबजेसम्म पनि गायक राई कार्यक्रम स्थलमा आईपुगेका छैनन् । घाईतेहरुको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ ।
तश्विर: दुर्घटनामा घाइते भएकाहरु मध्ये एक |
अहिले साँझ सम्म पनि गायक राईका दर्शक, श्रोता कुरेर बसी रहेका छन् । उनिसंगै प्रमुख आकर्षक नायक सुगम पोखरेल पनि आज घर परिवारमा विरामी परेको भन्दै विचबाटे बाटै फर्किएका छन् । गायक राईको गाडीसंग अर्को गाडी ठक्कर खाएको पुष्टी प्रहरी निरीक्षक डाक्टरप्रसाद चौधरीले दिएका हुन् । उनले गायक राईलाई केहि नभएको बताएका छन् ।
यसैबीच पछिल्लो अपडेट अनुसार घाइते राईको अवस्था सामान्य रहेको गुल्मीबाट हाम्रा सम्वाददाता प्रेम सुनारले जानकारी गराएका छन् । पत्रकार सुनार आफैले राईलाई भेटेर उनको अवस्था बारे जानकारी लिएका छन् ।
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित भएको ५० दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतका निस्क्एिका हुन् ।
मित्रराष्ट्र भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणका लागि शुक्रबार प्रस्थान गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : रासस
प्रधानमन्त्री ओली नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट बिहान ९ बजे भारत प्रस्थान गएका हुन् । उनलाई बिदाइ गर्नका लागि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु पुगेका छन् ।
को–को छन् भ्रमणको ५४ सदस्यीय टोलीमा ?
प्रधानमन्त्री धर्मपत्नी राधिका शाक्य
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल
संघीय संसद्का सदस्यहरु शरतसिंह भण्डारी, दीनानाथ शर्मा, रामेश्वर राय यादव, मोतिलाल दुगड, गणेशसिंह ठगुन्ना, शान्ता चौधरी, उमा रेग्मी, रामवीर मानन्धर, सीताराम महतो तथा विमलप्रसाद श्रीवास्तव
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे
नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा दिव्यासिंह शाह
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचाय
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासे
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य
कलाकार राजेश हमाल र निर्देशक दिनेश डिसी
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगाना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा वैद्यनाथ महतो
शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी
नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीबाट कार्यबाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी, इकोनोमिक मिनिष्टर कृष्णहरि पुस्करलगायत नौजना
राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालका सञ्चारकर्मी
यस्तेा छ कार्यतालिका
प्रधानमन्त्री ओलीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलबाट उर्लेपछि भारतीय उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम गर्नेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली दुताबासमा नेपाली समुदायसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शुक्रबार साँझ उनी नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुनेछन् । रात्रिभोजमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका साथै कूटनीतिज्ञ र पत्रकारलाई आमन्त्रित गरिएकोे छ ।
भारतीय समकक्षी मोदी र ओलीबीच शनिबारमात्र औपचारिक भेटवार्ता हुनेछ । बिहान राष्ट्रपति भवनमा मोदीले ओलीलाई स्वागत गर्नेछन् । त्यसपछि भारतीय सेनाले ओलीलाई उच्च सैनिक ‘गार्ड अफ अनर’ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसंग भारतका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले भेट्ने छन् ।
त्यसपछि ओली राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधीस्थल पुग्नेछन् । उनले त्यहाँ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ । हैदरवाद हाउसमा सुरुमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै वार्ता हुनेछ । त्यसपछि दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलसहितको औपचारिक छलफल हुनेछ । दिल्लीबाटै प्रधानमन्त्रीद्वयले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र वीरगञ्जमा रहेको संयुक्त चेकपोष्टको उद्घाटन गर्नेछन् । त्यसपछि हैदरावाद हाउसमै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना हुनेछ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीसंग भारतीय विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीले भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने भारतीय नेताले पनि शनिबार नै प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेट गर्नेछन । इण्डिया फाउण्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पनि ओली सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिवाभोजको आयोजना गरेका छन् । भने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले रात्रिभोज दिनेछन् ।
दिल्ली भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार प्रधानमन्त्री ओली उत्तराखण्ड जाने कार्यक्रम छ । उत्तराखण्ड स्थित पन्तनगरमा रहेको गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उनी सहभागी हुने छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधी उपाधि दिनेछ । प्रधानमन्त्री सोही दिन साँझ स्वदेश फर्किनेछन्।
(स्रोत : नेपाली न्युज २४)